Tuulada GABOGABO ee Degmada Tuli Guuleed oo Liyuu Boolisku Bandow saaray – Radio Daljir
Tuulada GABOGABO ee Degmada Tuli Guuleed oo Liyuu Boolisku Bandow saaray
Diseembar 3, 2019 1:29 b 0
Ciidamada Liyuu Booliska DDS ayaa bandow ku soo rogay tuulada GABOGABO oo hoostimaada dagmada TULI GUULEED ee gobolka FAAFAN. Bandowga ayaa yimid kaddib markii ciidanku ay amreen in shacabka tuuladu celiyaan xoolo laga soo dhacay Oromiya oo Oromadu hore xoolaha Soomaalida uga soo dhaceen.
Shacabka deegaanka Gabagabo oo xoolo u dhigma kuwii laga dhacay oo iskugi jira lo’, geel iyo adhi ka soo ceshaday Oromiya ayaa Liyuu Boolisku amreen in ay xoolaha celiyaan. Amarka celinta ayaa dhaliyey khilaaf ba’an oo shacabku ay ku diideen amarka booliska, kuna bilaabeen kacdoon ka dhan ah booliska.
Kacdoonka shacabka kabacdi, boolisku waxa ay shacabka u adeegsadeen rasaas nool, taasina waxa ay sii kicisay caradii shacabka. Booliska ayaa saacado kaddib waxa ay soo xireen tiro oday dhaqameedyo iyo hoggaanka dhallinta degaanka Tuli Guuleed.
Caawa & Daljir iyo Xuseen Cabdi Jimcaale Madar, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)